Mombamomba ny vondrona - Shanghai Jixiang Industry Co., Ltd.
China-Jixiang Group dia manana Jixiang Group amin'ny maha-ray aman-dreny azy, Shanghai Jixiang Aluminium Plastics Co., Ltd., Shanghai Jixiang Industry co., Ltd.Jixiang Aluminika Indostria (Changxing) Co.Ltd. Orinasa miorina ao amin'ny valan-javaboary faritanin'i Shanghai songjiang sy zhejiang changxing. Ny velarantany manontolo dia mihoatra ny 120.000 metatra toradroa, ny velaran'ny fananganana dia mihoatra ny 100000 metatra toradroa, vondron'orinasa isam-paritra iraisan'ny indostrialy, ny renivohitra voasoratra anarana dia 200 tapitrisa RMB .
Ny orinasa dia filoha lefitry ny filankevi-pitantanan'ny metaly mitambatra fitaovana & vokatra sampan'ny federasiona fananganana sinoa. Ny takelaka vita amin'ny aliminioma, ny takelaka vita amin'ny aluminium, ny vokatra vita amin'ny aluminium vita amin'ny rindrina vita amin'ny alumina. Ny orinasa dia nahazo ny mari-pahaizana momba ny rafitra fitantanana kalitao Iso90012008, IS14001: fanamarinana ny rafitra fitantanana tontolo iainana 2004, foibe fanandramana rafitra kalitaon'ny vokatra CTC. CE fanamarinana sy firenena hafa "fanamarinana manam-pahefana iraisam-pirenena.China - Jixiang Group dia lasa iray amin'ireo orinasa lehibe amin'ny indostria anatiny, ny fivarotana dia tonga any amin'ny tanàna lehibe sy salantsalany. AlusunBond dia manam-pahaizana manokana amin'ny varotra ivelany, naondrana tany Rosia, atsimo atsinanan'i Azia, Eropa, firenena sy faritra maherin'ny 50. Amin'ny maha mpisava lalana ny fironana iraisam-pirenena amin'ny fitaovana haingon-trano, ny olona Jixiang dia tsy afa-po amin'ny zava-bita ankehitriny, dia hisokatra, handray tsara ireo olona manam-pahaizana ao an-trano sy any ivelany hiara-miasa. hanangana endrika vondrona vondrona orinasa iraisam-pirenena.
Manam-pahaizana manokana amin'ny vokatra teknolojia avo lenta ny orinasa, manarona ny fanamboarana, ny fitaterana an-dalamby, ny fitaovana elektronika ary ny sahan'ny lovia haingon-trano hafa, manana ny R & D, ny famokarana, ny varotra, ny varotra ary ny serivisy; ny vokatra lehibe dia: aluminium-plastika mitambatra tontonana, aluminium mitafo fanitso tontonana tontonana, taratasy firakotra, loko coating alu foil, sns; Jixiang dia manana teknolojia mitarika, dingana famokarana tena tsara sy fikarohana matihanina. Amin'izao fotoana izao dia manana 15 miaraka amin'ny fanaraha-maso automatique lehibe ny tsipika famokarana izy. Amin'ny maha-indostria mpitarika ao an-toerana azy, hiara-hientana amin'ny tsena iraisam-pirenena, mamorona tsipika famokarana automatique vita amin'ny plastika vita amin'ny alimina avo lenta. Ity tetik'asa ity dia eo amin'ny laharana voalohany iraisampirenena, fenoy ny ao an-trano banga, nahazo patanty famoronana roa firenena.Jixiang no orinasa teknolojia avo lenta sy vaovao, ny teknolojia
ivon'ny orinasa; Shanghai marika marika malaza, marika ambony Shanghai, ary ny fidirana amin'ny minisitra nasionalin'ny siansa sy ny teknolojia valisoa fanombanana, ny minisiteran'ny zava-bita siantifika sy teknolojia hampiroborobo ny valisoa ho an'ny tetikasa, mari-pankasitrahana ho an'ny tetikasa fanavaozana fenitra ho an'ny indostrian'ny fananganana indostrialy taratasy fanamarinana, sns.
Marika an'ny vondrona
Ny vondrona China-Jixiang, manomboka amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe, manomboka amin'ny malemy ka hatramin'ny matanjaka, hatrany am-piandohana ka hatramin'ny fitarihana, dia nandeha tamin'ny lalam-pandrosoana miavaka.
1.Amineite mitambatra Pane National Standard nandray anjara Units
2. Unita mpandray anjara mavitrika an'ny National Panel Panel Aluminium
3.Auminum Wave-core compostie Panel National Units nandray anjara
4.National-tech orinasa lehibe
5.Nampiroborobo ny tetik'asa teknolojia fananganana trano ny teknolojia
6.Shanghai marika malaza
7.Shanghai marika ambony
Ho tonga kilasy voalohany an-trano, malaza amin'ny sehatra iraisam-pirenena, siansa fitantanana matanjaka, miaraka amin'ny ambaratonga manerantany, ny haavon'ny fitantanana sy ny fitarihana ny marika ary ny fampandrosoana maharitra ireo orinasa lehibe.
Miompana amin'ny fahombiazan'ny tsena ny foibe, tohanan'ny kolontsaina mandroso, ary manerana ny sisin-tany, ny orinasan-tserasera, ny hevitra fitantanana, ny rafitra fitantanana, ny fampidirana loharanom-pahalalana, ny fananganana talenta miaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena avo lenta. paikadin'ny marika ho an'i Shina · Jixiang Group.
Ao amin'ny vondrona orinasa lehibe, fahatsapana ny andraikitra, mitazona ny tombotsoan'ny besinimaro, ny fahaiza-mandanjalanja no manjaka amin'ny fifaninanana tsena, miaraka amin'ny fihetsika azo ampiharina amin'ny loharanon-karena tombony ho azy ireo, ny talenta, ny fahaiza-manao ary ny foto-kevitra, miteraka lanja ho an'ny fiaraha-monina, manatratra ny nofinofy iraisana.
Fitantanana ny ekipa
Eto dia hajaina ny tombontsoan'ny tena manokana sy ny zava-bitany, ny fiaraha-miasa miray saina ary ny fomba fiaraha-miasa, ny zava-bita China.Jixiang Groupthe ivon'ny firaisan-kina matanjaka.
Ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao amin'ny fahaiza-manao, mba hiantohana ireo mpikambana hiara-hamita ny tanjon'ny asa, ny fomba fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa dia hanadio ny tena hery anaty, io fanahy io dia ampahan'ny fanahy iray ao anatin'ny kolontsaina Shina · Jixiang Group, namorona ny fahatsapana ny iraka sy ny fananana ary ny maha izy azy.
Eo ambanin'ny fihetsiky ny ekipan'ny ekipa, ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia manana fitondran-tena mifampikarakara mifampikarakara, mifanampy, mampiseho ny tompon'ireo ekipa mpiahy ny fahatsapana andraikitra, ary manandrana mitazona hatrany ny voninahitra iraisan'ny ekipa, manoloana ny lazan'ny ekipa amin'ny ankapobeny. satria ny adidiny manokana dia namatotra ny tenany, ka ny fanahin'ny ekipa amin'ny fampandrosoana malalaka sy feno an'ny orinasa.
Ny talenta no fototry ny harenan'orinasa, miziriziry amin'ny fahatakarana, fanajana, fahatokisana, firaisan-kina, fambolena ny rafitra soatoavina talenta, manome lanja ny mpikambana rehetra amin'ny famoronana sy ny soatoavina, manatsara ny andraikitry ny mpiasa tsirairay; Minoa ny sandan'ny ekipa, miara-lehibe ny orinasa sy ny mpiasa.
.Fiezahana hamoronana tontolo iainana mirindra sy mahasalama, hahatonga ny mpiasa tsirairay hiasa tsara, fiainana salama.
. Fiheverana am-pahatsorana ny fivelaran'ny mpiasa tsirairay, ary ezaho ny hampivelatra ny mety ho an'ny mpiasa sy hanampy ny mpiasa hitombo.
.Mampiroborobo ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny fiaraha-miasa ary mifanampy.
.Mba hametraka tontolon'ny kolontsaina mirindra, rafitra fitantanana madio sy mangarahara.
.Mampiroborobo amin'ny fifantohana amin'ny fihetsika, diniho ny zava-bita, tandremo ny fahaiza-manao sy ny tsy fivadihana politika, ny fikatsahana ny hatsarana amin'ny famoronana foto-kevitry ny orinasam-panjakan'ny olona misafidy sy mampiasa olona.
.Amporisiho ny mpiasa handroso sy hivoatra, hametraka fandaminana miandalana